Dhukkubi Meniinjaaytis ykn Morma Googsaan Maali ?
Kibxata, Guraandhalaa 09, 2016 Local time: 18:44
WASHINGTON DC— Dhukkubii Meniinjaaytis ykn morma gogsaan yeroo ammaa Oromiyaa fi bulchiinsa uummatoota gama kibba Itiyoophiyaa keessatti darbee darbee mul’achuu isaa dhaabatti gargaarsa dhala namaa kan Tokkummaa mootummotaa OCHA beeksisee jira.
Oromiyaa keessaa Arsii Nagallee shaallaa Shaashamanne Dodolaa siraaroo wondoo fi Gadab Asaasaa keessatti mudachuu isaa jaarmayaan kun ibsee jira.
Dhukkuba kun baatilee roobnii hin jirree fi gogaa ta’an kan akka Amajji kaasee hanga waxabajjitti kan mul’atu yoo ta’u biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessaatti Seeneegaalii Ka’e Itiyoophiyaa kan ga’u ta’u beekamee jira.
Sammuu namaa fi lafee dugdaa miidhuun kan beekamu dhukkubi kun Afuraan kan daddabruu yoo ta’u wal’ansa hin argatuu taanaan lubbu namaa kan galaafatu ta’uun ibsameera.